यी ४ हुन् बलिउडका ब्रेकअपको पिडा भोगेका कलाकारहरु ,कसको को सँग ?(तस्विर) - Medianp.com
यी ४ हुन् बलिउडका ब्रेकअपको पिडा भोगेका कलाकारहरु ,कसको को सँग ?(तस्विर)
काठमाडौँ । बलिउडमा केही यस्ता कलाकारहरु पनि छन् । जसको धेरै अभिनेता वा अभिनेत्रीहरुसँग अफियरको हल्ला मात्र चलेर ब्रेकअप भयो । जसले गर्दा कसैले आफ्नो कलाकारिता नै छोडे । आज हामी तपाईलाई त्यस्तै ब्रेकअपको पिडा भोगेका बलिउडका ४ कलाकारको बारेमा कुरा गदै छौँ । हेर्नुस् को को हुन् ?
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री परिणीति चोपडा पनि ब्रेकअपको पिडा भोगेकी अभिनेत्री हुन् । उनको आफ्नो डेब्यू फिल्मको निर्देशक मनिष शर्मासँग अफियर रहेको हल्ला चलेको थियो । तर पछि ब्रेकअप भएको खबर बाहिरिएको थियो । परिणीतिले नै एक अन्तवार्तामा एक समय आफु ब्रेकअपको पिडामा परेको बताएकी थिइन् ।
एक समय दिपिका पादुकोणको पनि रणवीर कपुरसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको हल्ला चलेको थियो । तर अहिले दिपिका रणवीर सिंहसँग छिन् ,भने रणवीर कपुर र आलिया भट्टसँग रोमान्स गरिरहेका छन् । तर दिपिकाले एक अन्तवार्तामा रणवीर कपुरसँग ब्रेकअप हुनुको कारण बताएकी थिइन् , उनले भनिन् मैले उसलाई रंगे हात भेटेकी थिए ।
गायिका नेहा कक्कड पनि ब्रेकअपको पिडा भोगेकी कलाकार हुन् । उनी कुनै समय टीभी अभिनेता हिमांश कोहलीसँग प्रेममा परेकी थिइन् । तर लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि ब्रेकअप भयो । उनले एक अन्तरवार्तामा भनिन् , प्रर्सनल लाइफमा जे भएपछि म सधै उनको प्रोफेशनल लाइफमा हासेको देख्न चाहन्छु ।
फिल्म कबिर सिंहबाट निकै राम्रो चर्चा बटुलेका शहिद कपुर पनि ब्रेकअपको पिडा भोगेका अभिनेता हुन् । उनको पनि अभिनेत्री करिना कपुरसँग अफियर रहेको चर्चा चलेको थियो । तर पछि उनीहरुको पनि ब्रेकअप भयो । त्यसपछि शहिदले मीरा राजपूतसँग बिहे गरेका थिए । हाल फिल्म कबिर सिंह पछि उनी बलिउडमा सबैभन्दा महंगो अभिनेता बनेका छन् । उनले भने , यो मेरो करियरको सबैभन्दा ठुलो सफलता हो ।
आयुषको स्वरमा ‘हजार जुनी सम्म’ को शीर्ष गीत सार्वजनिक (भिडियो)